पोखरा–काठमाडौं रुटमा ‘विश्वकै उत्कृष्ट बस’ ! प्रत्येक सिटमा टिभी, खाना टेबल – BIG FM 101.2 MHz
Home » व्यापार / व्यवसाय » पोखरा–काठमाडौं रुटमा ‘विश्वकै उत्कृष्ट बस’ ! प्रत्येक सिटमा टिभी, खाना टेबल
पोखरा–काठमाडौं रुटमा ‘विश्वकै उत्कृष्ट बस’ ! प्रत्येक सिटमा टिभी, खाना टेबल
पोखरा, ५ असोज/यातायातका साधनमा लगानी गर्दै आएको पोखरा जगदम्बा ट्राभल्स प्रालिले अत्याधुनिक सुविधा सहितको सुपरडिलक्स बसमा लगानी बिस्तार गरेको छ । प्रालिले पोखरा काठमाडौं रुटमा शुक्रबारबाट उक्त बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । संसारकै उत्कृष्ट स्तरको बस सञ्चालन गर्न लागिएको प्रालिका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले दावी गरे ।
नयाँ बस शुक्रबार पोखराबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालन हुँदैछ भने शनिबार काठमाडौंमा सेवा शुभारम्भ गरिनेछ । प्रत्येक सिटमा टेलिभिजन तथा खाना टेबल रहने बस २१ सिट क्षमताको छ । बसभित्रै रेष्टरुम र मिनीबारको सुविधा रहेको उक्त बस पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति अन्तर्गत सञ्चालन हुँदैछ ।
आनन्दसँग सुतेर यात्रा गर्न सकिने उक्त बसमा ब्रेकफास्ट तथा लन्चको सुविधा समेत उपलब्ध रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । बस दैनिक बिहान ८ बजे काठमाडौं र पोखराबाट छुट्नेछ । यात्रुको सुविधाका लागि बस क्रियु खटिनेछिन् । दुई वटा बसमा प्रति बस करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको अधिकारीले जानकारी दिए । अमेरिकाबाट सिट आयात गरी भारतमा टाटाको अत्याधुनिक च्यासिज प्रयोग गरी बस तयार गरिएको उनले बताए ।
भाडादर ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको उक्त बसमा खाना बफेडको ५ सय ५० रुपैयाँ, खाजाको १ सय ५० रुपैयाँ, क्रियु सर्भिस शुल्क ५० रुपैयाँ, काउज सिड शुल्क २ सय रुपैयाँ, मनोरञ्जन शुल्क २ सय ५० रुपैयाँ, चिया, कफी, चिसो तथा चकलेट शुल्क २ सय रुपैयाँ, रेष्टरुम शुल्क ५० रुपैयाँ सहित जम्मा भाडादर २ हजार २ सय रुपैयाँ तय गरिएको समितिका महासचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । अति विशिष्ट खालको बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित समिति अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
राज्यले यातायात प्राधिकरण गठन गरेर यातायात क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष ऐनकुमार साई बताउँछन् । संस्थाले आगामी दिनमा थप स्तरीय बसहरु सञ्चालन गर्ने उनले बताए । समिति अन्तर्गत १ हजार ३ सय ५५ गाडी सञ्चालनमा छन् । ‘ती मध्ये अधिकांश गाडी डिलक्स मापदण्डका छन्,’ उनले भने, ‘समिति अन्तर्गत देशभरका रुटमा बसहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।’
पोखरा जगदम्बा ट्राभल्स प्रालि लाई बधाई, आगामी दिनमा थप स्तरीय बसहरु सञ्चालन गर्दै लैजानु ..